फडिन्द्र भट्टराई, लन्डन, वैशाख १०
नेपालको तनहुँ कमलाबारीमा जन्मेका डा. बच्चु कैलाश कैनी बेलायतमा आगामी जुन ८ मा हुन गई रहेको आम निर्वाचनमा लेबर पार्टीको तर्फबाट सम्भावित उम्मेदवारको सूचीमा परेका छन्। दक्षिण पूर्वी इंगल्याण्डको डार्टफोर्ड काउन्सिलमा हाल लेबर पार्टीबाट काउन्सिलर रहेका कैनी डार्टफोर्ड संसदीय निर्वाचन क्षेत्रबाट सांसदको लागि छनोट भएका तीन जना सम्भावित उम्मेदवार मध्ये एक हुन्।
सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै डा. कैनीले आफू सांसदको सम्भावित उम्मेदवार बनिरहँदा यहाँको नेपाली समुदाय र भावी पुस्तालाई उत्प्रेरणा मिलन सक्ने बताए। आफ्नो छनोटमा कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा कैनीले भने, ‘मेरो आफ्नो योग्यता र क्षमताको साथसाथै पार्टीको माईनरीटी प्रार्थमिकता अनुरुप पनि छनौट हुने सम्भावना छ’, ‘छनोट हुनु नहुनु आफ्नो ठाउँमा रहला तर मेरो सर्टलिस्टिङले यहाँको नेपाली समुदायलाई पनि स्थानीय राजनीतिमा सक्रिय रहने हौसला प्रदान गर्ने छ भन्ने लागेको छ, उनले अगाडि थपे।
नेपाली समुदायमा समेत सामाजिक रुपमा सक्रिय रहेका कैनी लेबर पार्टीको सन् २०१४को म्यानचेस्टर अधिवेशनमा महासमिती प्रतिनिधि समेत रहेका थिए। उनी २०१५को स्थानीय निर्वाचनमा काउन्सिलरको रुपमा ४ वर्षको लागि निर्वाचित भएका हुन्।
हाल क्वीन एलिजावेथ हस्पिटल लन्डनमा बरिष्ठ व्यवस्थापकको रुपमा कार्यरत डाक्टर कैनी बेलायतमा नेपाली लेखन र साहित्यमा पनि परिचित नाम हो।
नेपालमा पारिवारिक हिसाबले राजनैतिक पृष्ठभूमि बोकेका डाक्टर कैनीका पिता स्वर्गीय मेघनाथ कैनीको नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा तनहुँ जिल्लाबाट योगदान रहेको थियो ।
प्रकाशित मिति: आईतबार, वैशाख १०, २०७४, ०७:२१:३९